संसदमै उठ्यो यस्तो आवाज, 'सिंहदरवारभित्र किन भारतीय लगानीका बैंक मात्र छन् ?' (भिडियोसहित)
ARCHIVE, POWER NEWS » संसदमै उठ्यो यस्तो आवाज, 'सिंहदरवारभित्र किन भारतीय लगानीका बैंक मात्र छन् ?' (भिडियोसहित)
काठमाडौँ - सिंहदरवारभित्र भारतीय लगानी भएका बैंकमात्र किन छन् भन्ने कुरा संसदमै उठेको छ । संसदको बैठकमा सांसद प्रेम सुवलले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । विशेष समय लिंदै उनले सिंहदरवारभित्र पहिला र अहिलेको बैंकिङ कारोबारको भिन्नता बारेमा समेत बोलेका छन् । भिडियोमा हेर्नुहोस् उनको आवाज :
अहिले सिंहदरवारभित्र एभेरेष्ट बैंक र नेपाल एसबीआइ बैंकले आफ्नो सेवा दिइरहेका छन् । यो विषय पटक पटक अर्थ समितिमा समेत पुगेको भएपनि यसको खास सम्बोधन हुन सकेको छैन । भारतीय दुतावासको खास पहलमा यस्तो काम भएको केहि सांसदहरुले नै आरोप लगाउने गरेका छन् भने नेपाल सरकारले समेत यसबारेमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।